Nezvedu | Ningbo Daohong Machine Co., Ltd.
1.Daohong kambani inomhanya nezano repasirese uye inovandudza bhizinesi redu kuUnited States, Europe, Japan, Canada, Australia nedzimwe nyika. Iyo kambani yakaramba ichitarisirwa uye kuvandudzwa zvichienderana nekambani uzivi "Hupenyu hupenyu" nguva dzese kubvira 2009.
2.On 2014 takanga tawana yedu Stainless simbi swivel zvikamu patent chitupa. Uye fo unded Hui heng fekitori huru kuburitsa patent yedu zvikamu.
3. Takanga taburitsa zvinodarika 50000 mhando dzakasiyana dzevatengi vedu. (2 mafekitori + vashandi vanosvika zana + mazana mashanu ezvigadzirwa + diki diki + kutumira nekukurumidza) .90% yezvigadzirwa zvekugadzira zvinotengeswa kubva kuJapan neGerman kupa vatengi vedu zvigadzirwa zvemakwikwi zvakanakisa.
4.Product renji inovhara yetsika cnc machining zvikamu, shaft zvikamu, giya uye giya shaft zvikamu, yekutsika mativi, isu tinotarisa pane dzinokonzeresa maitiro ekucheka, kukuya, kurova, nekukorobha kwe diki dhayamita chaiyo simbi zvikamu, uye isu zvakare R&D yedu pachedu brand TV Mounts, yakamira tafura, yekufambisa zvikamu;
Ivo vaisimbiswa nezvitupa senge ROHS, SGS;
Uine zvinopfuura Makore gumi kutumira kunze ruzivo, isu tine yekutanga-mwero yekugadzira tambo neyemberi yekugadzira bvunzo nzvimbo, senge gungano mutsara, yekuyedza mutsara
Zvigadzirwa zvesimbi zvinonyanya kushandiswa muminda dzakasiyana siyana, kambani inokoshesa kukosha kukuru mukuvandudza kwesainzi & matekinoroji, sevhisi uye manejimendi.
Zvigadzirwa zvedu zvakatumirwa kune zvinopfuura 30 nyika nematunhu kutenderera pasirese.
Inyanzvi yekugadzira uye kuburitsa zvigadzirwa zvemagetsi muChina zvakasarudzika muR & D, kugadzirwa uye kutengesa.
Tiri kuedza kusangana nechinangwa chekuvandudza FULLWILL kupinda munyika inotungamira yakasanganiswa chaiyo simbi zvikamu uye kutarisira kutanga kwenguva refu bhizinesi hukama newe pakubatsirana.
Yedu Technician Injiniya ane anopfuura makore mashanu echiitiko chebasa, tinogona kuita yepamutemo 2D dhizaini uye 3D dhizaini zvinoenderana nevatengi vedu sampuli uye mazano.
Pfungwa yako + DAOHONG = ZVINOGONESESA
CNC nemazvo otomatiki LATHE
KUDHORA UYE TAPI MACHINE
CNC LATHER Spare zvikamu
ZVITATU ZVINOGONESESA KUEDZA INSTRUMENT (CMM)
MUNYU KUNYANYA KUDZINGA MACHINE
Nemazvo machine zvikamu
CNC Machine: Kururama ± 0.01mm
Cnc Precision otomatiki Lathe: Kururamisa ± 0.003mm
Lathe: Kururama ± 0.01mm
Yedu Service Maitiro
Isu takaburitsa anopfuura mazana mashanu emazana emhando dzakasiyana dzeCCC dzakagadziriswa zvikamu.